na admin on 20-08-14
Yakaomeserwa insured girazi unit 15mm yakaderera simbi + 15A + 15mm yakaderera simbi Low-E, @ 12 metres
U mbiri girazi rekunze nyika chimiro
U mbiri girazi rekunze nyika chimiro chirongwa Girazi mhando: Inopisa Asina simbi U mbiri girazi Kukura: 7mmX260X60mm, Kureba = 3385mm Zvimwe: Koshongedza pendi, uye marambi e LED Nzvimbo: Qinhuangdao China.
Nyaya yekudzidza: Yakapisa simbi U mbiri girazi reAdidas chitoro
na admin on 20-07-24
Projekiti: Adidas chitoro Chigadzirwa: Yakaomeswa yakaderera simbi U mbiri girazi Kukura: 7mmX260mmX60mm Teerero: Nashiji Inotarisana: Sandblasted mukati
Yakaomeswa SGP yakarukwa girazi, yakakombama & Jumbo
na admin pa 20-07-17
Yakaomeswa SGP yakarukwa girazi, Yakatemerwa & Jumbo Isu takasarudzika muJumbo yakavezwa yakatsikwa girazi uye yakamisirwa girazi, iyo max saizi isu tinokwanisa kutonga @ 12.5meter murefu, arc kureba 2.4 metres, min radius 1300mm. Kukura kwegirazi muvhidhiyo ndeye 8 + 1.52SGP + 8, @ R2000mm, Arc urefu ...
Kugadzira chigadziko cheU profile-LABER U profle girazi
Mushure memusangano wevhidhiyo mupfupi nemutengi weJapan, tora vhidhiyo kubva kune yedu yekugadzira chigadzirwa cheU profile girazi. Yongyu Glass® ndiyo Strategic Partners yeLABER ® U mbiri yegirazi zvigadzirwa. Isu tinogadzira uye kutumira yakakwirira-inoshanda yakaderera yesimbi U mbiri girazi zvigadzirwa. Isu tino ...
Webhusaiti itsva, kutanga kutsva
na admin on 20-06-26
Webhusaiti nyowani, kutanga kutsva Chekutanga, ruzivo ruri muwebhu nyowani hupfumi, hwakarongeka, vatengi vanowana ruzivo rwavanoda nyore kupfuura o ...
Yongyu Girazi uye Munoshanda pamwe Kurwisa Denda
na admin on 20-06-06
Chivabvu 11, 020 Pasinei nedambudziko rakanyanya reCCIDID-19 denda, Yongyu Girazi rakadzokera kune zana muzana rekugadzira. Yedu chigadzirwa chehuwandu chinofukidza yakaderera-iron U-yakamisikidzwa girazi / magetsi chizvarwa U-chimiro girazi system, hombe yakatsamwa girazi / lamoni girazi / IGU; yakakotamiswa girazi / rakarodzwa girazi / IGU; DuPont SGP la ...
10m LABER Temp Yotsvedzeka yesimbi U mbiri Girazi rakabudirira Kutungirwa Kunze Mutsetse weGungano
Fucheng girazi tempering zvishandiso yakagadziriswa yakakwiridzwa nehupamhi hwekugadzirisa kureba kwemamita gumi nemaviri. Giramu gumi-ye-yakagadzirwa girazi rakabudirira kubudiswa kubva mutsara wekereke. Kuti uwane rumwe ruzivo: 400-089-8280
Yongyu Girazi, Nhengo Itsva YeAmerican Ice Rink Association!
Yongyu Glass akabatana neAmerican Lingwing Factory Association munaKubvumbi 1, 2020. Iyo American Skating Rink Association (yaimbova STAR) isangano risingabatsiri kuwana mari yenhengo inoshandira vanhu vamwe, zvivakwa uye vanopa zvigadzirwa mu skating rink nema arena maindasitiri. Yakatangwa muna 2000 na ...
LABER® Big Wave text U U-Girazi Girazi rakabudiswa Zvakabudirira
Huru Kukura Bent Yakaomeswa Bent Laminated Glass
Saizi yakakura yakakomberedzwa yakakomberedzwa yakakomberedzwa girazi Maximum kureba: 12,5mm Mimita yakadzika radius: 1250mm Maximum arc kureba: 2400mm Thickness: 8-15mm Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota bvunza: 400-089-8280
Frosted U chiteshi Girazi rekushandisa Nyaya-bmw 4s Shopu